VaGoche Vanotuta Shuga Muchitoro cheTM Vanhu Vakaimirira Mumitsetse
Kurume 13, 2008
Gurukota rezvevashandi nemabasa, VaNicholas Goche, avo vari kukwikwidza musarudzo dzeparamende muShamva North vakamirira Zanu PF, vanonzi vatuta shuga kubva pachitoro chekwaTM muBindura, vakaenda nayo vachisiya vanhu vanoda kusvika kuchiuru vanga vachida kutenga shuga, vakamira mumutsetse wekutenga shuga.
Zvinonzi shuga yatanga kutengeswa pachitoro ichi mangwanani chaiwo, paine mapurisa anodzivirira mhirizhonga nevechidiki veBorder Gezi, asi pasvika VaGoche vanonzi vangonanga muchitoro ndokutora mapakiti anodarika mazana maviri ema2 kg eshuga.
Hazvina kuzivikanwa kuti VaGoche vaendepi neshuga iyi. Studio 7 yatadza kubata VaGoche sezvo nhare yavo yanga ichiramba kupinda. Hatinawo kukwanisa kunzwa divi rechitoro cheka TM
Asi mumwe mugari wemuBindura, VaSaymore Mhene, avo vaonawo VaGoche vachitora shuga iyi vaudza Jonga Kandemiiri weStudio 7 kuti bato reZanu PF riri kutengesa shuga iyi nemari inota $17.5 million pamukoto.